Vaovao - Fikarakarana ny fantsika hoho: fehezan-dalàna manan-danja ho an'ny fantsika salama
Fikarakarana Cuticle Nail: fehezan-dalàna manan-danja ho an'ny fantsika salama
Mba hitazonana ny hoho ho tsara sy ho tsara dia tsy azo tsinontsinoavina ny fikarakarana cuticle.Ankoatr'izay, ankoatra ny fitazonana ny fahasalaman'ny hoho, ny fikarakarana tsara ny cuticle dia mety hahatonga ny hoho ho tsara tarehy kokoa.
Esory aloha izay loko misy hoho na hoho izay mety amin'ny hoho.
1. Manaraka izany, asio menaka stratum corneum nitete vitsivitsy, ary otrao mandritra ny minitra vitsivitsy ny stratum corneum sy ny hoditra manodidina azy mba hanalefahana sy hamandoana.
2. Manaraka izany, mampiasa fandavahana fantsika cuticle mba hanala moramora ny cuticle (ny hoditra eo amin'ny faran'ny fantsika) amin'ny fantsika.
3. Farany, raha ilaina, mampiasa hety cuticle mba hanesorana ny hoditra maty be loatra.Ny hety cuticle koa dia azo ampiasaina hanapahana ny hoho rehetra (indraindray ny hoditra mitsilopilopy mipoitra avy amin'ny sisin'ny fantsika).
4. Fanamarihana: Tandremo tsara rehefa tapahana fotsiny ny hoditry ny stratum corneum maty sy ny hoditra mbola miraikitra amin'ny rantsantanana.Aza tapahina ny hohoo na ny hoho!Tsy tokony esorinao tanteraka ny cuticle, satria mety ho mora voan'ny aretina ny hoho.
Misy karazany telo nybitika fantsika cuticle: diamondra, seramika ary vy tungstène.Na izany na tsy izany dia mety ho izay ilainao, raha malefaka ny cuticle, sarotra ny diamondra ary hirodana ny cuticle, ary ao anatiny izy ireo,tungstène vy cuticle fantsika drill bitmiasa ara-dalàna amin'ny toe-javatra sarotra sy sarotra.Ny cuticle henjana kokoa.
Fotoana fandefasana: Dec-31-2021